काठमाडौं: बौद्ध मत चार दर्शनमा विभाजन छ । माध्यमिक योगाचार, सैद्धान्तिक र वैभाषिक । यी चार प्रकारका मतमध्ये प्रथम माध्यमिक दर्शनमाथि हामी यहाँ विचार गर्न गइहरेका छौँ । माध्यमिक मतका अनुयायीहरूका अनुसार जति पनि वस्तुसत्ता छन्, जति भाव छ, त्यो सब क्षणीक मात्रै हो ।
जस्तै– हामी बादलको घटना प्रत्यक्ष देख्दछौँ तर क्षण मात्रा नै त्यो नष्ट हुन पुग्छ । यसै प्रकारले सम्पूर्ण सत्पदार्थ क्षणीक छ । सत्को लक्षण– ‘अर्थक्रियाकारित्वम् सत्वम् ।’ कुनै वस्तुको क्रिया गर्ने स्वभाव नै सत्ता हो । काम भयो, सत्ता सकियो, यो माध्यमिक सिद्धान्त हो । यदि पदार्थको सत्ता स्थायी मानेमा के ‘अर्थक्रियाकारित्वम् सत्वम्’ यो लक्षण घट्दैन त ? यस प्रश्नको उत्तरको उनीहरू यसरी दिन्छन् । यदि सत्तालाई स्थायी मान्ने हो भने क्रियालाई पनि स्थायी नै मान्नुपर्दछ । तर पानी भर्ने क्रिया स्थुल हुन सक्दैन । किनकि जब घडा भरिन्छ तब भूतकाल हुन पुग्छ । त्यसको क्रिया समाप्त हुन पुग्छ ।
भविष्यमा पनि यसै प्रकार क्रियाको एक परिस्थितिकालमा अन्त्य नै हुन पुग्नेछ । जस्तो कि वर्तमानमा हुन्छ । अत ः यो क्रिया स्थायी छैन । घडाको घडापन पनि पानी राख्दा मात्रै निर्भर छ । त्यसैले त्यो घडा पनि जुन भूतकालमा पानी भरिएको थियो, समाप्त हुन पुग्यो । घडाको गुणमा एक प्रधानगुण जलाहरणमा बराबर परिणाम वा परिवर्तन हुने हुनाले घडा पनि निरन्तर बद्लि नै रहन्छ । यद्यपि हामी भन्नलाई चाहिँ त्यही घडा नै भन्दछौँ । अतः घडाको सत्ता पनि क्षणीक छ । भूतकालमा बीजबाट अंकुर, अंकुरबाट दुई दल, फेरि डाँठ, हाँगा, पात आदि सब बने । आज पूmल पूmलिरहेछ । यसै प्रकारबाट अनुमान लाग्दछ कि तीनै कालमा बारम्बार परिवर्तन भइरहेका छन् ।
कुनै पनि क्षणमा त्यही सत्ता रहँदैन जो केहीबेर अगाडि थियो । गंगाको लागि भन्दछौं कि जो लाखौं वर्ष पहिले थियो र्। आज पनि त्यही हो । तथा यो त प्रत्यक्ष नै छ कि गङ्ग लगातार बगिरहन्छ, जो जल एक क्षणमा एक स्थानमा हुन्छ, अर्को क्षणमा अर्कै स्थानमा पुग्दछ । अतः गङ्गामा पानी बग्ने क्रिया जसले गङ्गापन ल्याउँदछ, त्यो पनि क्षणीक छ । त्यसैले गङ्गाको सत्ता पनि क्षणिक भयो । यस्तै तथ्यहरूको आधारमा माध्यमिक दर्शनले जगतलाई क्षणिक मान्दछन् । यसै प्रकारले सबै संसारको दुःखरूपत्व पनि चिन्तन गर्नुपर्नेछ । नत्र त संसारबाट निवृत्ति चाहने बुद्धिमान पुरुष पनि त्यसको उपायमा प्रवृत्त हुन सक्दैनन् अर्थात निवृत्तिको लागि यत्न गर्दैनन् ।
यदि संसारलाई दुःखस्वरूप मान्ने हो भने दुःखबाट छुटकारा पाउन निवृत्तिको उपायमा प्रवृत्ति हुनसक्दछ । त्यसैले सबै दुःख दुःख नैै त हो । यो भावना ल्याउनुपर्दछ । अन्य भावना पनि ल्याउनुपर्दछ । जस्तो कि यो संसार स्वलक्षण हो । यो किन ? यसप्रकार प्रश्नपूर्वक विचारमा कुनै दृष्टान्त पाइँदैन । किनकि अघि भनिएको रीतिबाट सबै वस्तु क्षणीक भएझैँ समान लक्षणको अभाव छ अर्थात् यसको सदृश यो हो कि जुन समय भन्दछौँ, त्यस समय यो क्षणीक वस्तु हुँदैन र त्यसको समान लक्षण पनि हुँदैन । त्यसकारण यो यसको समान छ, त्यो भन्न पनि मिल्दैन । अत ः सबै वस्तु स्वलक्षण छन् । आफ्नो मात्रै लक्षण छ । कुनै एक वस्तुको समान अर्को वस्तुलाई मान्न सकिँदैन । त्यसैले सबै वस्तु स्वलक्षण छन्, स्वलक्षण हुन् । यही भावना ल्याउनुपर्दछ ।
यसै प्रकार ‘सबै शून्य हुन्’ शून्य छन् । यो भावना पनि ल्याउनुपर्दछ । जति वस्तु छन्, सबै सत् छन् या असत् छन् या सत्–असत् उभयरूप हुन् । या न सत् छ, न असत् नै छ । यदि घडादी पदार्थ सत् मानेमा कारक प्रयत्नको कुनै आवश्यकता छैन । घडादीत पहिल्यैदेखि वर्तमान नै छ भने कुमाले चाका, दण्डी, माटो, धागो, यी कारणको के प्रयोजन ? यदि घडाको असत् नै स्वभावको हो भने उक्त कुमाले आदि असत् छ । जस्तै बाँझोको छोरा, आकाशको पूmल यी चीजमा हजारौँ कारण एकत्र गर्दा पनि हुन सक्दैन । न त कोही त्यसलाई बनाउने प्रयत्न नै गर्दछ । यदि भनौँ कि सत्–असत् उभयरूप हुन् भने यो पक्ष पनि यसैले त्याज्य छ कि जो सत् छ त्यो असत् हुन सक्दैन । र, जो असत् छ त्यो सत् हुन् पनि सक्दैन । यदि जो सत् छैन, त्यो असत पनि छैन भनेमा यो बढ्ता व्याघात हुन्छ । किनकि जो सत् हुदैन, त्यो अवश्य नै असत् हुने छ, जो असत् होइन, त्यो सत् पनि होइन । यो भन्नु पनि अनुचित हुनेछ । जहाँ असत् होइन, त्यो अवश्य नै सत् हुनेछ । त्यसैले विरोधी कारणबाट न त उभय पक्ष नै ठीक छ न त अनुभव पक्ष नै ठीक छ । भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ–
न सत कारणपेक्षा व्योमादेरिव युज्यते ।
कार्यास्यासम्भवी हेतुः खपुष्पादेरिवासतः ।।१।।
बुद्धां विच च्यमानानाम् स्वभावो नावधाअर्यपे
अतो निरभीलिप्यास्ते निस्वभावश्च दर्शिता
इदम् वस्तुवलायतम् यद्धदि विपश्चिता
यथायथाधीश्चिल्पनते विशीर्पन्ते तथातथा त्यन्ते ।।
सब क्षणिक, सब क्षणिक छ, दुःख छन्, दुःख हुने, स्वलक्षण छ, स्वलक्षण हो, शून्य हो, शून्य हो, यी चार प्रकारको भावनाबाट परम् पुरुषार्थ अर्थात् मुक्ति मिल्दछ । यो शून्यमा सबै वस्तुका मेल हुनु नै मुक्ति हो । सर्वशून्यत्ववादी माध्यमिकका मतको यही स्थिति छ । यिनीहरू माध्यमिक किन भनियो भने नि, बुद्ध भगवान्को उपदेशअनुसार आधा मात्रै ग्रहण गरेर आधाचाहिँ छाडी दिएँ । मध्यमा बस्न पुगे, त्यसैले माध्यमिक गनिए ।